လူ တစ်ယောက်ဟာ ကံညံ့တော့မယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ….ဘယ်လို ရှောင်လွှဲနိုင်မလဲဆိုတာ – Shwe Likes
လူ တစ်ယောက်ဟာ ကံညံ့တော့မယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ….ဘယ်လို ရှောင်လွှဲနိုင်မလဲဆိုတာ
Shwe | February 12, 2020 | Knowledge | No Comments
လူ တစ်ယောက် ဟာ ကံညံ့လာတော့မယ် ဆိုရင်
(၁) အရင်ကထက် ပိုပြီး ဒေါသ၊ လောဘ၊ မောဟပိုကြီးလာ တတ်တယ်ပါတယ် ။ အရင်ကထက် ထစ်ခနဲရှိ စိတ်တိုနေပြီဆို သတိထားဗျ။ ကံညံ့တော့မယ်လို့ ပြတာပဲ …။
(၂) မကောင်းတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ကောင်းတယ်လို့ မြင်လာ တတ်တယ်။ ဥပမာဗျာ ..အရင်က အရက်သိပ်မသောက်ဖြစ်ဘူး ဆိုပါတော့… ကံညံ့တော့မယ်ဆို ..အကြောင်းပြချက်မရှိ အရက်ခဏခဏ သောက်ဖြစ်တာမျိုး… မကောင်းတဲ့ မိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို သူငယ်ချင်းကောင်းလို့ ထင်လာတာမျိုးပေါ့ …။
(၃) ဆိုဆုံးမတဲ့ စကားတွေကို နာခံဖို့ ခက်ခဲလာတတ်တယ်။ လူကြီးမိဘတွေက ဆုံးမရင်မနာခံဘဲ ထင်ရာလုပ်နေမိတတ်ပါတယ် …။
(၄) အပျော်အပါး ပိုမက်လာတယ်…အရင်က အပျော်အပါးကို ကြုံမှလုပ်တတ်ပေမဲ့ ကံညံ့တော့မယ်ဆို အပျော်ဘက်ကို အချိန်ပို ပေးလာတတ်ပါတယ် …။
(၅) မွေးလရောက်ခါနီးတိုင်း အပြောင်းအလဲ တစ်စုံတစ်ရာကြုံတယ်။ ဆိုပါတော့ဗျာ ပြဿနာ တက်တာမျိုး ၊ အစွပ်အစွဲခံရတာမျိုး ၊accident အသေးလေးဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ် …။
(၆) ဒါကတော့ ကြိုသတိပေးတာပါ။ အိမ်မက်ထဲမှာ နိမိတ်ပြတာမျိုးနဲ့ လာပြီးဆောင်ရန်ဆောင်ရန် ပြောတာမျိုးပါ။ ဒါကတော့ ကုသိုလ်များသူနဲ့ ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူတွေရဲ့ အကူအညီကြောင့် သိရတာပေါ့ဗျာ …။
“ကံဆိုးမိုးမှောင်တွေ လွင့်ပြယ်စေမည့် အဓိဌာန်”
တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘာလုပ်လုပ်၊ ဘာပြောပြော အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကံဆိုးမသွားလေရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသလိုပေါ့ ။ တစ်ခါတစ်လေ၊ တစ်ခုတစ်လေလောက် ကံညံ့တယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ ကြုံကြရတတ်တာပဲလေ။ သို့ပေမဲ့ လနဲ့ချီပြီးတော့ သိသိသာသာကိုပဲ ကံဆိုးမိုးမှောင်တွေ ဆက်တိုက်ကြုံနေပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ထူးခြားဖြစ်စဉ် ဖြစ်နေပါပြီ …။
ကိုယ့်အပေါ်မှာ ကံကြမ္မာဂြိုလ်ဆိုးက ရက်ရက်စက်စက် ဖိစီးနှိပ်စက်နေတာ သေချာသွားပြီပေါ့။ အဲဒါမျိုး ကြုံလာခဲ့ပြီဆိုရင် ဟောဒီအဓိဋ္ဌာန်လေးကို (၉)ရက် ဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ် …။
မနက်စောစော အိပ်ရာထပြီး ကိုယ်လက်သန့်စင်ပါ။ ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားမှာ အဆင်ပြေတဲ့ ပန်းတစ်မျိုးမျိုးရယ်၊ သောက်တော်ရေချမ်းတစ်ခွက်ရယ်၊ အလင်းတိုင်တစ်တိုင်ရယ်၊ အဆင်ပြေရာ သစ်သီးတစ်မျိုးမျိုးရယ် ကပ်လှူပါ …။
ပြီးတော့ မိမိတတ်သမျှ၊ မှတ်သမျှ ဘုရားပူဇော်ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက် ဟောဒီအဓိဋ္ဌာန်ကို ပြုလုပ်ပါ။ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ လေကို တစ်ဝကြီး ရှူသွင်းရှူထုတ် ပြုလုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ် …။
လေကို ရှူသွင်းတဲ့အချိန်မှာ အရဟံလို့ စိတ်ထဲကရွတ်ပါ။ လေကို ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဗုဒ္ဓေါလို့ စိတ်ထဲက ရွတ်ပါ …။
ပုတီးတွေဘာတွေနဲ့တောင် မှတ်မနေပါနဲ့။ ၉ မိနစ်လောက် ခန့်မှန်းပြီး ပြုလုပ်ပါ။ (၉)ရက်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ ကျေးငှက် တရိစ္ဆာန်လေးတွေ၊ ရေသတ္တဝါတွေကို အစာကျွေး တဲ့ကုသိုလ် ပြုလုပ်ပါ …။
အဲဒါဆိုရင် ကိုယ့်အပေါ်မှာ ဖိစီးနှိပ်စက်နေတဲ့ ကံဆိုးမိုးမှောင်တိမ်တိုက်တွေ လျော့ပါးသွားစေ ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ …။ ။
လူ တဈယောကျ ဟာ ကံညံ့လာတော့မယျ ဆိုရငျ
(၁) အရငျကထကျ ပိုပွီး ဒေါသ၊ လောဘ၊ မောဟပိုကွီးလာ တတျတယျပါတယျ ။ အရငျကထကျ ထဈခနဲရှိ စိတျတိုနပွေီဆို သတိထားဗြ။ ကံညံ့တော့မယျလို့ ပွတာပဲ …။
(၂) မကောငျးတဲ့ ကိစ်စရပျတှကေို ကောငျးတယျလို့ မွငျလာ တတျတယျ။ ဥပမာဗြာ ..အရငျက အရကျသိပျမသောကျဖွဈဘူး ဆိုပါတော့… ကံညံ့တော့မယျဆို ..အကွောငျးပွခကျြမရှိ အရကျခဏခဏ သောကျဖွဈတာမြိုး… မကောငျးတဲ့ မိုကျတဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို သူငယျခငျြးကောငျးလို့ ထငျလာတာမြိုးပေါ့ …။
(၃) ဆိုဆုံးမတဲ့ စကားတှကေို နာခံဖို့ ခကျခဲလာတတျတယျ။ လူကွီးမိဘတှကေ ဆုံးမရငျမနာခံဘဲ ထငျရာလုပျနမေိတတျပါတယျ …။
(၄) အပြျောအပါး ပိုမကျလာတယျ…အရငျက အပြျောအပါးကို ကွုံမှလုပျတတျပမေဲ့ ကံညံ့တော့မယျဆို အပြျောဘကျကို အခြိနျပို ပေးလာတတျပါတယျ …။
(၅) မှေးလရောကျခါနီးတိုငျး အပွောငျးအလဲ တဈစုံတဈရာကွုံတယျ။ ဆိုပါတော့ဗြာ ပွဿနာ တကျတာမြိုး ၊ အစှပျအစှဲခံရတာမြိုး ၊accident အသေးလေးဖွဈတတျတာမြိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ …။
(၆) ဒါကတော့ ကွိုသတိပေးတာပါ။ အိမျမကျထဲမှာ နိမိတျပွတာမြိုးနဲ့ လာပွီးဆောငျရနျဆောငျရနျ ပွောတာမြိုးပါ။ ဒါကတော့ ကုသိုလျမြားသူနဲ့ ပဋ်ဌာနျးဆကျရှိသူတှရေဲ့ အကူအညီကွောငျ့ သိရတာပေါ့ဗြာ …။
“ကံဆိုးမိုးမှောငျတှေ လှငျ့ပွယျစမေညျ့ အဓိဌာနျ”
တဈခါတဈလမှော ဘာလုပျလုပျ၊ ဘာပွောပွော အဆငျမပွဘေူးဆိုတာမြိုး ကွုံရတတျပါတယျ။ ကံဆိုးမသှားလရော မိုးလိုကျလို့ရှာဆိုသလိုပေါ့ ။ တဈခါတဈလေ၊ တဈခုတဈလလေောကျ ကံညံ့တယျဆိုတာမြိုးကတော့ ကွုံကွရတတျတာပဲလေ။ သို့ပမေဲ့ လနဲ့ခြီပွီးတော့ သိသိသာသာကိုပဲ ကံဆိုးမိုးမှောငျတှေ ဆကျတိုကျကွုံနပွေီဆိုရငျတော့ ဒါဟာ ထူးခွားဖွဈစဉျ ဖွဈနပေါပွီ …။
ကိုယျ့အပျေါမှာ ကံကွမ်မာဂွိုလျဆိုးက ရကျရကျစကျစကျ ဖိစီးနှိပျစကျနတော သခြောသှားပွီပေါ့။ အဲဒါမြိုး ကွုံလာခဲ့ပွီဆိုရငျ ဟောဒီအဓိဋ်ဌာနျလေးကို (၉)ရကျ ဆောငျရှကျစခေငျြပါတယျ …။
မနကျစောစော အိပျရာထပွီး ကိုယျလကျသနျ့စငျပါ။ ပွီးတော့ မွတျစှာဘုရားမှာ အဆငျပွတေဲ့ ပနျးတဈမြိုးမြိုးရယျ၊ သောကျတျောရခေမျြးတဈခှကျရယျ၊ အလငျးတိုငျတဈတိုငျရယျ၊ အဆငျပွရော သဈသီးတဈမြိုးမြိုးရယျ ကပျလှူပါ …။
ပွီးတော့ မိမိတတျသမြှ၊ မှတျသမြှ ဘုရားပူဇျောရှိခိုးပွီးတဲ့နောကျ ဟောဒီအဓိဋ်ဌာနျကို ပွုလုပျပါ။ ဘာလုပျရမလဲဆိုတော့ လကေို တဈဝကွီး ရှူသှငျးရှူထုတျ ပွုလုပျဖို့ ဖွဈပါတယျ …။
လကေို ရှူသှငျးတဲ့အခြိနျမှာ အရဟံလို့ စိတျထဲကရှတျပါ။ လကေို ရှူထုတျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဗုဒ်ဓေါလို့ စိတျထဲက ရှတျပါ …။
ပုတီးတှဘောတှနေဲ့တောငျ မှတျမနပေါနဲ့။ ၉ မိနဈလောကျ ခနျ့မှနျးပွီး ပွုလုပျပါ။ (၉)ရကျပွညျ့မွောကျတဲ့နကေ့တြော့ ကြေးငှကျ တရိစ်ဆာနျလေးတှေ၊ ရသေတ်တဝါတှကေို အစာကြှေး တဲ့ကုသိုလျ ပွုလုပျပါ …။
အဲဒါဆိုရငျ ကိုယျ့အပျေါမှာ ဖိစီးနှိပျစကျနတေဲ့ ကံဆိုးမိုးမှောငျတိမျတိုကျတှေ လြော့ပါးသှားစေ ပါလိမျ့မယျတဲ့ဗြာ …။ ။
ရှားရှားပါးပါး February ၂၉ ရက်နေ့ မှာ သဘောကျတဲ့ ယောက်ျားလေးကို အမျိုးသမီးတွေ ချစ်ခွင့်ပန်နိုင်
ခုနှစ်ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ( ၁၉ . ၂ . ၂၀၂၀ မှ ၂၅ . ၂ . ၂၀၂၀ ထိ )
ပရိတ်တို့ ပဋ္ဌာန်းတို့မှာ မမြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေ ရှိတယ်
မြန်မာနိုင်ငံ ထဲက လျှို့ဝှက် တရုတ်မြို့တော် ဆိုသော နေရာ….